Magaalo Allahu Akbar oo lala qeyliyo la isku tooganayo! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka, Uncategorized October 4, 2017	0 196 Views
Venice (Himilonetwork) – Qof kasta oo ku qeyliya kalmadda Allahu Akbar waa la toogan doonaa, sidaas waxaa yiri maayarka magaalada Venice ee dalka Talyaaniga.
Faaqidista qorshaha ay kaga hortagaan falalka argagaxiso ee ka dhacay Paris, London, Barcelona iyo meelo Yurub kamid ah, wuxuu yiri; “Waxaan u baahannahay inaan sare u qaadno heerka amnigeenna iyo halista argagaxisada. “
“Waxay sheegaan inay doonayaan inay Ilaahooda la kulmaan: annaguna si toos ah ayaan ugu diraynaa. Uma baahnaa inay buundooyinka iska xooraan. Waan tooganaynaa,” ayuu sii raaciyay.
Previous: Barnaamij loo sameeyay ragga doonaya inay si fudud xaasas badan ku guursadaan!
Next: 05 October – Maalinta Macalinka Adduunka.